Ity misy fomba 10 ahafahanao mampitombo ny fifampiraharahana amin'ny atiny hita maso | Martech Zone
Ity misy fomba 10 ahafahanao mampitombo ny fifampiraharahana amin'ny atiny hita maso
Paikady lehibe amin'ny famolavolana endrika sy fampidirana sosialy anay ny fifantohana amin'ny atiny hita maso. Ny fizarana infografika misy kalitao ao amin'ny tranokalanay dia nampiakatra be ny fahatongavanay ary mamela ahy hiresaka ny atiny ao amin'izy ireo amin'ny fizarana tsirairay. Ity infographic avy any Canva ity dia tsy misy hafa amin'izany - mandehandeha amin'ny olona amin'ny fomba isan-karazany ahafahanao manao atiny hita maso. Ary tena ankasitrahako ny torohevitra lehibe omen'izy ireo:
Manome anao fanjakana maimaim-poana ny votoaty hita maso hanamboarana ny hafatrao, hampiasa teknika sy mpanelanelana samihafa hahitanao ny hafatrao, fitaovana tena ilaina tsy misy fetra izy io.
Zava-dehibe toy izany amin'ny Internet ny fanavahana. Rehefa manoratra lahatsoratra aorian'ny lahatsoratra isika dia mila miasa mafy amin'ny fanavahana azy amin'ny lahatsoratra an'arivony hafa izay navoaka isan'andro tao amin'ny tranonkala. Manampia maso iray manan-danja iray, na izany aza, ary misy fiatraikany vaovao tanteraka amin'ireo mpitsidika anao ilay lahatsoratra. Tsy izany ihany, ny fizarana ny lahatsoratra dia mitombo mihombo.
Mampiseho aminao i Canva amin'ity sary ity Karazana atiny Visual Visual mahafinaritra tokony hamorona dieny izao ny marikao:
Saripika mahasarika maso - 93% ny mpividy no milaza fa ny sary no # 1 manapa-kevitra rehefa mividy vokatra.
Karatra fakan-tsary manentana ny fanahy - Ny teny nalaina dia maneho ny soatoavinao, mora ny mamorona ary azo zaraina be.
Fiantsoana mahery vaika hatao - 70% ny orinasa tsy manana antso ho amin'ny hetsika na dia mety handray andraikitra aza ny mpijery.
Sary misy marika - Ny fampiasana sary amin'ny antsipiriany sy marika dia afaka manampy anao hanana saina 67% bebe kokoa.
Fanehoana an-tsary mahaliana - 40% ny olona mamaly sy mahatakatra ny mombamomba ny maso noho ny lahatsoratra tsotra.
Lahatsary mampandray anjara - Ny 9% -n'ny orinasa kely ihany no mampiasa azy ireo, fa ny 64% -n'ny mpanjifa kosa mirona kokoa hividy rehefa avy mijery horonantsary.
Torohevitra, hafetsena ary fomba ahoana - Manome lanja sy ampiasaina amin'ny vokatrao ary manampy amin'ny fananganana fahefana.
Pikantsary mampahalala - 88% ny olona mamaky hevitra hamaritana ny kalitaon'ny orinasa, makà pikantsary momba ny hevitrao!
Fanontaniana mampieritreritra - Mamporisika ny fifampizarana, fifampiresahana, fandraisana andraikitra ary fanentanana amin'ny marika.
an-tsary - Misy antony DK New Media mamokatra infografika marobe ho an'ny mpanjifanay! In-3 azo inoana kokoa no zaraina ary ny orinasa mampiasa infografika dia mitatitra tombony 12% avo kokoa noho ireo izay tsy.
Tags: canvakarazana atiny hita masosary an-tsary
Sep 14, 2017 amin'ny 6: 56 AM
Lahatsoratra mahafinaritra sy sary. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fampitana ny hafatra momba ny raharaham-barotra amin'ny hafa ny votoaty hita maso sy ny fitaovana fanontana.